तपाई आफ्नो भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? हातको औँलामा लगाउनुहोस् यसरी बनेको कछुवाको औँठी। – News Nepali Dainik
तपाई आफ्नो भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? हातको औँलामा लगाउनुहोस् यसरी बनेको कछुवाको औँठी।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: १९:४८:४३
वास्तशास्त्रअनुसार यस्तो मान्ने गरीन्छ कि सबै तरहका धातु र रत्नका औँठी लगाउनका लागी पनि विभिन्न किसिमका नियम र सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । औँठी लगाउनुभन्दा पहिला यदि वास्तुशास्त्रअनुसार बताइएको नियमको पालना नगरेको खण्डमा त्यस जातकका मानिसलाई नोक्सान उठाउनुपर्ने हुन्छ । यस लेखको माध्यमबाट हामी तपाईलाई औँठी लगाउनुको सबै नियम र कुन औँठी लगाउदाँ राम्रो परिणम प्राप्त हुन्छ यसको सबै जानकारी दिनेछौँ ।
जीवनमा आइपर्ने कठिनाइ वा कुनै पनि अन्य समस्याहरूको लागि वास्तु अनुसार रत्न धारण गर्ने परम्परा प्राचीन कालदेखि नै आएको छ। उही तरीकाले, हातको औंलाहरूमा बिभिन्न आकारको अलग अलग औंठी लगाउने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसोभए आउनुहोस् हामी जानौं कि कुन आकारको र कस्तो औँठीले तपाईंलाई लाभदायक वा हानिकारक हुन्छ।
प्रसिद्ध कछुवाको औँठी
प्रायजसो, कछुवा आकारको औठी धेरै मानिसहरूका हातमा कुनै न कुनैको एउटा औंलामा फेला पर्दछ, तर यसको पछाडिको रहस्य के हो भनेर थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। क्याटर वाला औँठी विभिन्न धातुहरूको अनुसार राखिन्छ, जसले वास्तु दोषहरू समाप्त हुन्छ ।
ज्योतिष अनुसार, कछुवालाई धन र धनको आपूर्तिकर्ता वा सकारात्मक सोच र प्रगति को मार्ग प्रशस्त गर्ने वालाको रुपमा मानिन्छ । पौराणिक कथा र दन्त्यकथाका अनुसार कछुवालाई भगवान विष्णुको अवतार पनि मानिन्छ, जसको कारण कछुवालाई सृष्टिको रूपमा अत्यन्तै शुभ मानिन्छ जसले गर्दा व्यक्तिले कछुवाको औंठी हत्केलाको औंलामा लगाउने गर्दछन् ।
तर वास्तुका अनुसार बनाइएका नियमहरूमा केही राशिका व्यक्तिहरूले कछुवाको औठी बिर्सिएर पनि लगाउनु हुँदैन। मेष, कन्या, वृश्चिक र मीनका मूल निवासीहरू कछुवा औंठी लगाउन प्रतिबन्धित छन्।
नव ग्रह भएको औंठी लगाउनुका फाइदा र बेफाइदा
सबैभन्दा पहिले यो जान्नु आवश्यक छ कि नवग्रहहरू के हुन् ? नवग्रह एक संस्कृत शब्द हो, ? जसको अर्थ समात्नु वा कब्जा गर्नु हो, यो नवग्रह अर्थात् मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य र चन्द्रमा सँगै आकाश सबै एउटै औंठीमा समाहित हुन्छन्, रत्नको रूपमा हातका औंलाहरू यस प्रकारको औँठी लगाउनुका पनि धेरै फाइदाहरू छन्।
यो विश्वास गरिन्छ कि नवग्रहहरूको औंठीले मानसिक पीडा हटाएर, शान्त मन प्रदान गरेर, खुशी र समृद्धिलाई बढाएर र कडा स्वास्थ्य प्रदान गरेर पूरा हुन्छ। जसको कारण यो लगाइएको हुन्छ। यो नवग्रह औँठीले नकारात्मकता जरैबाट हटाउन मदत गर्छ ।
कालो घोडाको नालले बनेको औँठी
मान्यता अनुसार शनिदेव यदि कसैप्रति दयालु छन् भने त्यो राम्रो कुरा हो तर यदि कुनै व्यक्तिले भगवान्‌को शनिदेवको क्रोध भोग्छ भने उसको जीवन विनाश हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शनिदेवलाई प्रसन्न तुल्याउन र शनिदेवको कृपा बराबर पाइरहन, कालो घोडाको नालले बनाइएको औंठी लगाइन्छ, जसले शनि दोषलाई प्रभाव पार्छ।
सूर्य ग्रहलाई मजबूत बनाउनको लागी एक तामाको धातुको औँठी लगाइन्छ। सामाजिक वातावरणमा, मान,सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न चाहने मूल निवासीहरूले तामा धातुले बनेको औठी लगाउनु पर्छ।
Last Updated on: February 8th, 2021 at 7:48 pm